Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in aysan aqbaleyn in dib loo dhigo dacwadda Badda | Banaadir Times
HomeUncategorisedDowladda Soomaaliya oo shaacisay in aysan aqbaleyn in dib loo dhigo dacwadda...
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in aysan aqbaleyn in dib loo dhigo dacwadda Badda
Xilli dowladda Kenya Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ka codsatay in makii Afaraad dib loo dhigo dacwadda Badda oo kala dhaxeeysa Soomaaliya ayaa waxaa kasoo horjeestay dalabkaas dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in Kenya u gudbisay Maxkamadda ICJ in dib loo dhigo kiiska badda ,balse marnaba aqbaleyn Dowladda Soomaaliya in kiiska badda dib loo dhigo.
Wasiirka oo Shir jaraa’id Warbaahinta ugu qabtay Muqdisho waxaa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay Maxkamadda ICJ u gudbisay qoraal ay ku cadeyneyso inay diyaar u tahay inay ka qeyb-gasho dacwadda badda, isla markaana aysan aqbaleyn in dib loo digo kiiska badda.
Waxaa uu sheegay in Kenya ay dhowr jeer kiiska Badda codsatay in dib loo dhigo, waxaana uu ku eedeeyay in aysan dooneyn in kiiskaas la qaado ayna dooneyn inay cadaaladda hortagaan.
Sidoo kale Wasiirka waxaa uu sheegay in Kenya si ay mar marsiiyo ugu hesho ay dhamaan shaqadii ka ceyrisay qareenadii u doodayay, waxaana uu markale ku celiyay in Dowladda Soomaaliya uu go’ankeedu yahay in kiiskaasi la qaado waqtigii Maxkamadda iclaamisay.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe waxaa uu ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaalida inay hal meel uga soo wada jeestaan cadowga Soomaaliya una diyaar garoobaan difaaca dalka
Kiiska dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya ayaa Soomaaliya waxaa ay Maxkamadda ICJ u gudbisay Bishii Agoosto sanadkii 2014-kii, waxaana ay soo martay heerar kala duwan.
Previous articleMalabsade iyo ‘xaasaskiisii’ beenta ahaa oo lasoo xiray
Next articleCiidamo la kala dhex-dhigay laba Maleeshiyo Beeleed oo dagaalamay